Semalt कसरी वेबसाइट अप्टिमाइज गर्ने र सामग्रीको खोजीमा यो अत्यन्तै देखिने बनाउनको लागि वर्णन गर्दछ
Semalt कसरी वेबसाइट अप्टिमाइज गर्ने र सामग्री खोजी गर्नका लागि यो अत्यन्तै देखिने बनाउँदछ
II। "उत्पादमा SEO निर्माण" को अर्थ के हो?
III तपाईंको व्यवसायको लागि उत्पादनमा एसईओ निर्माण गर्दै
IV। एक उत्पादनमा SEO निर्माण गर्न सडकमा
V. एक उत्पादनमा SEO निर्माणको फाइदाहरू
के तपाईंको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू पहिले नै उच्च बिक्री र राजस्व उत्पन्न गर्दैछन्? यदि हो भने, तिनीहरूले अझ बढी गर्न सक्दछन्। के तपाइँको एसईओ-आधारित कार्यहरूले नाफा र राजस्व ल्याइरहेको छैन? तिनीहरूले अझै पनि तपाईंको लागि बिक्री उत्पन्न गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंले माथिका दुई मध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाफ हो भने, तपाईं आफ्नो व्यवसाय को लागी मापन उत्पाद मा एसईओ निर्माण विचार गर्नुपर्छ।
एसईओ, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन रणनीति, विधि, र गतिविधि इन्जिन अनुकूलन गर्न को लागी एकको वेबसाइट र सामग्री अनुकूलन गर्न को लागी दर्ता गरीएको छ। एसईओ ज्यादातर एक अमूर्त घटना मानिन्छ। यो पुग्न कठिन छ वा प्राप्त गर्न को लागी। र यसको प्रयोग गरिसकेपछि, यो कहिलेकाँही प्रभावकारी पनि हुँदैन जस्तो कि यो मान्नुपर्छ। त्यो किनभने अधिकांश व्यक्ति यसलाई संरचित र स्केलेबल बनाउँदैनन्।
यो त्यहि हो जहाँ उत्पादनमा एसईओ निर्माणको काम आउँदछ। एसईओलाई उत्पाद बनाउनु भनेको एसईओलाई अमूर्त अवधारणा भन्दा बढी बनाउनु हो। यसको मतलब एसईओ संरचित र स्केलेबल बनाउने हो। र हो, उत्पादनमा एसईओ निर्माण गर्दा आश्चर्य कार्य गर्दछ। केवल एक उदाहरणमा र उत्पादकता र परिणामहरूमा भिन्नताका साथ, तपाईं एउटा व्यवसाय भन्न सक्नुहुनेछ जुन एसईओलाई एक उत्पादनको रूपमा उत्पादनको रूपमा प्रयोग गर्दछ केवल एसईओ प्रयोग गर्दछ - अमूर्त घटना।
उत्पादनमा SEO निर्माण अब वैकल्पिक हुनु हुँदैन। यो राम्रो व्यापार अभ्यास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उत्पादन मालिकहरू जसले खोज अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन् तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरूमा एसईओ निर्माण गर्न आवश्यक छ। तिनीहरू जान्दछन् कि ग्राहकहरू सूचना पहुँच गर्न सक्षम हुन चाहन्छन जुन उनीहरूलाई के खरीद गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
एक उत्पादन मा एसईओ निर्माण तपाईंको ग्राहकहरु को लागी एक उपयोगी तरीका प्रदान गर्न तल आउँछ को लागी तपाइँको उत्पाद मा अन्तर्निहित मूल्य पहुँच गर्न। तपाईंको सामग्री प्राविधिक परिप्रेक्ष्यबाट समझ बनाउनुपर्दछ र मानव मानसलाई पनि पूरा गर्दछ। यसले मानिसहरूलाई तपाईंको उत्पादसँग सहज महसुस गराउनु पर्छ यसको मूल्य बुझ्नु पर्छ।
व्यक्ति जो खरीद संग सहज महसुस अधिक खर्च अन्त। तिनीहरू छोटो अवधिमा उत्पादनको लागि भुक्तान गर्न तयार हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ - तिनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूले कति तिर्दै छन्।
तपाईको अर्को चरण प्रयोगकर्ताशब्दको अनुभवमा केन्द्रित हुनुपर्दछ कुञ्जी शब्द भरिभरा भन्दा बढि। व्यक्तिहरूको लागि तपाईंको उत्पादको मूल्य पहुँच गर्न एक उपयोगी तरीका प्रदान गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई एक्लै तपाईंको उत्पादको गुणमा बेच्नुहोस्। उनीहरूलाई किन तपाइँको उत्पादन चाहिन्छ भन्नुहोस् र अनि यसले उनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ वर्णन गर्नुहोस्। यो स्पष्ट पार्नुहोस् कि यो उनीहरूले बनाउने लगानी हो - तर फेरि फेरीमा नसोच्नुहोस् र उनीहरू यो स्वतन्त्र रूपमा सोच्नुहोस्।
उत्पादमा अर्थपूर्ण SEO निर्माणको अन्तिम चरण स्केलेबल वास्तुकलाको कार्यान्वयन हो। स्केलेबल आर्किटेक्चरको अर्थ उच्च गुणवत्ता, सजिलै प्रयोगयोग्य उत्पादन प्रदान गर्नु हो जुन स्केलेबल पनि हो। यदि तपाईंले भर्खर सिर्जना गर्नुभएको उत्पादन प्रयोग गर्न एकदम सजिलो छ भने, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अपील गर्दछ किनकि उनीहरू सोच्दछन् कि यो यसको लायक हो।
खोजी ईन्जिनबाट जैविक ट्राफिक निर्माण गर्नु धेरै चीजहरूको संयोजन हो। अझै पनि, यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटले जैविक ट्राफिक प्रत्येक चोटि कसैले त्यो सर्त प्रयोग गरी खोजी कार्य गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई एसईओलाई तपाइँको उत्पादन प्रस्तावमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
कुनै उत्पादनमा एसईओ कसरी बनाउने भनेर सिक्नु त्यति गाह्रो छैन जति कोही मानिसहरूले सोच्न सक्छन्। यदि तपाइँ एसईओ लाई उत्पादनमा निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले पहिला बुझ्नु पर्छ कि लक्ष्य भनेको तपाइँको साइटमा ग्राहकहरुलाई ड्राइभ गर्नु हो। तपाईंको साइटको लागि उपयोगी उत्पादनमा एसईओ कसरी बनाउने भनेर सिक्दै समय र ध्यान लिन्छ, तर तपाईं परिणामहरू देख्नुहुनेछ धेरै पहिले जब तपाईं यसलाई तल झर्नुहुनेछ।
१. किवर्ड अप्टिमाइजेसन
यो पूरा गर्ने सब भन्दा साधारण तरीका भनेको किवर्ड अप्टिमाइजेसन प्रयोग गरेर हो। जब तपाइँ यो कसरी गर्ने सिक्नुहुन्छ, तपाइँ विशेष कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाइँको उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। यो ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी मद्दत गर्दछ जुन तपाईले खोज्नु भएको कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ। धेरै नि: शुल्क उपकरणहरू यो गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूसँग Google उपकरण योजनाकार, मोज, अहरेफ्स, Semalt उपकरण, आदि जस्ता उपकरणहरू सामेल छन्। तपाईं विशेष सफ्टवेयर पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि यो गर्न सक्दछ।
२. ब्लगिंग र लेख निर्माण
तपाईंको साइटको लागि उत्पादनमा एसईओ निर्माण गर्ने अर्को तरीका ब्लगहरू र लेखहरू प्रयोग गर्नु हो। लेखहरू तपाइँको उत्पादनको बारेमा हुनुपर्दछ, र तपाइँ तिनीहरूलाई लेखमा प्रयोग गरिएको कुञ्जीशब्द राखेर ती अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेख डाइरेक्टरीहरूमा पेश गर्न पनि उपयोगी छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको साइटमा ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ जसले तपाइँको खोज ईन्जिनलाई याहू र बिंग जस्ता तपाइँको उत्पादनलाई खोज परिणाममा उच्च राख्न मद्दत गर्दछ।
Your. तपाइँका प्रमुख उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि अवतरण पृष्ठहरू सिर्जना गर्दै
तपाईंले आफ्ना प्रमुख उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि अवतरण पृष्ठहरू सिर्जना गर्ने बारे पनि विचार गर्नुपर्छ। यो पहिले नै अवस्थित अवस्थित वा तपाइँले सिर्जना गर्नुभएको वेबसाइटमा लिंक गर्नुपर्दछ। सामग्रीमा प्रासंगिक कुञ्जी शब्द राख्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि यसले खोजी ईन्जिनहरूबाट ट्राफिक खिच्नेछ। तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई होशियारीका साथ निगरानी गर्न चाहानुहुन्छ कि यो तपाइँको उत्पादनहरूको लागि पूर्ण रूपले अनुकूलित छ।
Your. तपाइँको उत्पादनहरु लाई जोड्दै
विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा तपाईंले आफ्नै साइटबाट बेच्नुहुने उत्पादनहरूलाई लिंक गर्नु हो। जब तपाइँ उत्पादनमा एसईओ कसरी बनाउने सिक्नुहुन्छ, तपाइँले यसलाई ठीकसँग गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू अरूसँग लिंक गर्न चाहानुहुन्छ ताकि तपाईंको ग्राहकहरू जाँच गर्न आएकालाई मनपर्दैन भने, ती पनी तपाईंको साइटमा अन्यमा जान सक्छन्।
यदि तपाइँ तपाइँको साइट भित्र यी सबै लिंक गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसोभए तपाइँले अर्को व्यवसायको मालिकसँग सामेल हुने बिचार गर्नु पर्छ जुनसँग तपाइँसँग मिल्दो वेबसाइट हुन सक्छ। यसको उत्तम तरीका भनेको तपाईको आफ्नै साइटमा लिंकहरू खरीद गर्नु भनेको माउसको क्लिकको साथ।
तपाईंको साइटमा तिनीहरूको लिंक भएको बदलामा, उनीहरूले तपाईंले बेच्ने उत्पादनहरूको प्रचार गर्नेछन्। यसको राम्रो उदाहरण यो हो जब कसैसँग मार्केटिंगको बारेमा ई-पुस्तक छ जुन उनीहरूले बेच्दछन्; उनीहरूले आफ्नो साइटमा ई-बुक प्रमोट गर्न प्रस्ताव गर्न सक्दछन् उनीहरूको लिंकमा उत्पादनमा समावेश भएको बदलामा।
१. खोज ईन्जिनमा कुञ्जी शब्दहरूको लागि कम प्रतिस्पर्धा
एक उत्पादन मा SEO निर्माण को धेरै फाइदाहरु छन्। खोज ईन्जिन अप्टिमाइज गरिएको सामग्रीको साथ, पृष्ठमा कुञ्जी शब्दहरूका लागि धेरै कम प्रतिस्पर्धा छ। उत्पादन ब्रान्डका लागि जुन नयाँ छन् वा राम्रोसँग परिचित छैनन्, एसईओको उनीहरूको उत्पादनमा निर्मित हुनुले उनीहरूको प्रोफाइल बजार ठाउँमा बढाउन मद्दत गर्दछ र उनीहरूको ब्रान्डि the ग्राहकको अगाडि राख्न मद्दत गर्दछ। यो एक ग्राहक आधार निर्माण र नाफा वृद्धि गर्न को लागी एक उत्तम तरिका हो।
२. यसले तपाईंको ब्रान्डि strategy रणनीति सुधार गर्दछ
जब व्यक्तिहरू तपाइँको ब्रान्डको बारेमा सोच्दछन्, तिनीहरू सामान्यतया तपाइँ वा तपाइँको बेच्ने उत्पादनहरूका बारे सोच्दछन्। उत्पादको बारेमा जति धेरै व्यक्तिहरू जान्दछन्, बिक्रीको सर्तमा यसले अझ राम्रो गर्दछ। त्यसोभए, तपाइँको ब्रान्डलाई तपाइँको ग्राहकहरू र ग्राहकहरूको विचारहरूमा राख्न एउटा तरिका SEO लाई एक उपयोगी उत्पादमा निर्माण गर्नु हो। यदि तपाईंसँग एसईओ अझैसम्म तपाईंको उत्पादन मा निर्मित छैन भने, तपाईं अब सुरू गर्न आवश्यक तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरु र ग्राहकहरु संग आफ्नो संभावना वृद्धि गर्न को लागी।
जब तपाइँ एक वेबसाइट मा एसईओ निर्माण, तपाइँ तपाइँको विशेष को लागी विशेषज्ञ को रूप मा आफूलाई ब्रान्डिंग हुनेछ। मानिसहरूले तपाईंलाई तुरून्त एक विशेषज्ञको रूपमा पहिचान गर्नेछन्। व्यक्तिले अधिक उत्पादनहरू खरीद गर्दछन तिनीहरू विश्वास गर्छन् उनीहरू विश्वास गर्न सक्छन्। यदि तपाइँ तपाइँको उत्पादन को वरिपरि एक अनलाइन ब्रान्ड निर्माण, तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु को संख्या रातारात वृद्धि हुनेछ। वेबसाइटमा एसईओ निर्माणका फाइदाहरू हेर्नका लागि स्पष्ट छन्।
It. यसले तपाइँको ब्रान्डलाई बढी जोखिम दिन्छ
जब बढि व्यक्तिहरूले तपाइँको उत्पादन बारे अनलाइन थाहा पाउँदछन्, तिनीहरूले तपाइँको जानकारी केवल तपाइँको भन्दा अधिक वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सक्नेछन्। अधिक जोखिमले तपाईंलाई अधिक महत्त्वपूर्ण नाफा कमाउने अवसर दिन्छ। अधिक व्यक्तिहरू जुन तपाईंको उत्पादनको बारेमा जान्दछन्, अधिक ग्राहकहरू तपाईंसँग हुनेछन्। यो इन्टरनेट मार्केटिंगको एक सजिलो रूप हो जुन तपाईंलाई सम्भावित सोचेभन्दा बढी सम्भावित ग्राहकहरू दिनेछ। र तपाईं यसलाई एक शीर्ष-निशान उत्पादनमा एसईओ निर्माण गरेर हासिल गर्नुहुनेछ।
It. यसले तपाईंको यातायातलाई बढावा दिन्छ
तपाइँसँग तपाइँको साइटमा अधिक यातायात प्राप्त गर्न सजिलो समय हुनेछ। जब कोही तपाइँको वेबसाइट मा आउँछ, संभावना छ कि तिनीहरूले पहिले नै अन्य विकल्पहरू अनलाइन अन्वेषण गरेका छन्। उत्पादन बेच्न यो धेरै सजिलो छ यदि तिनीहरूलाई पहिले नै थाहा छ कि उनीहरू कहाँ किन्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई तपाइँको साइट भ्रमण गर्न एक कारण दिनेछ, र तब तिनीहरूले सम्भवतः तपाइँबाट किन्नेछन् किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ कहाँ जान। यसका साथै बढि ट्राफिक पाउनु बिक्री बढाउन सब भन्दा सजिलो तरीका हो।
It. यसले अधिक बिक्री उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ
तपाईंको साइटको लागि उत्पादनमा एसईओ निर्माण गरेर, तपाईं कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जसले तपाईंलाई बढी ग्राहकहरू प्राप्त गर्दछ। कुञ्जी शब्दहरू वाक्यांशहरू हुन्छन् ग्राहकहरूले वेबमा तपाईंको उत्पाद खोजिरहेको बेला। अधिक खोजहरू तपाईको विशेष उत्पादको लागि, तपाईको श्रेणी उच्च हुन्छ इन्जिनहरूमा। यसले तपाइँलाई अनलाइन ग्राहकहरुमा पहुँच दिनेछ, र यसको मतलब अधिक सम्भावित बिक्री पनि छ।
एक पटक जब मानिसहरूले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा पत्ता लगाउँदछन्, तिनीहरू सम्भवतः तपाईंको उत्पादन किन्न इच्छुक हुनेछन्। तपाईले आफ्नो वेबसाइटबाट अझ बढि बिक्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाई आफ्नो साइटमा बेच्ने उत्पादनहरु लाई सम्बद्ध लिंकहरु थप्नुहुन्छ। यो तपाइँको हात मा ग्राहकहरु को संख्या को वृद्धि हुनेछ। जब तपाइँ तपाइँको उत्पादनको वरिपरि एक ब्रान्ड निर्माण गर्नुहुन्छ, तपाइँबाट खरीद गर्ने व्यक्तिको स increase्ख्या बढ्नेछ, र तपाइँको उत्पादन अरूलाई सिफारिस गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्नेछ।
समग्रमा, साइटमा SEO निर्माणको फाइदा स्पष्ट छन्। तपाईंको साइटमा बढि आगन्तुकहरू, अधिक रूपान्तरणहरू, थप ब्याकलिks्कहरू, र तपाईं आफ्नो क्षेत्रको विशेषज्ञको रूपमा चिनिनुहुनेछ। के मनपर्दैन?
एक उत्पादनमा एसईओ कसरी बनाउने भनेर सिक्नु तपाईंको सोच्नमा गाह्रो छैन। तपाईंले आफ्नो साइट प्रमोट गर्न ईन्टरनेटमा लिंकहरू निर्माण गर्न समय लिनुपर्नेछ, र तपाईंले आफ्नो साइटमा उच्च-गुणवत्ता ट्राफिक कसरी उत्पन्न गर्ने भनेर सिक्नुपर्नेछ। तर यदि तपाइँ आफ्नो अनुसन्धान गर्न समय लिनुहुन्छ र प्रत्येक चरण कसरी ठीक तरिकाले गर्ने सिक्नुहोस्, त्यसोभए तपाइँको साइटको लागि उत्पादनमा एसईओ निर्माणको प्रक्रिया यस्तो चीज हो जुन तपाइँ सजिलै मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ। कुञ्जी स्थिर छ र यसलाई मास्टर्स नगरेसम्म यसलाई जारी राख्नुहोस्। वा अझ राम्रो, Semalt तपाइँलाई उत्पादनको लागि SEO निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरू संग, यो एक सहज व्यापार सवारी हुनेछ।